advanced Rice Color Sorter Machine in discolor saar Rice oo wax ka khayr badan Dibadda
Kharashka-oolka ah Capacity sare sorting.The cusub ZHONGKE Rice Color Sorter iyo doorashada kowaad ee Processor Rice doonaya Lahaanshaha, Hubinta iyo ka shaqeynayaan of dhaxalkooda indhaha kalabuxu iyo technology qiimo ah la awoodi karo.
ZHONGKE Marie mashiinka Sorter midabka bariis waa fiican ee Processor Rice Sort noocyo kale duwan oo Rice iyo processing kala duwan oo kala duwan stages.The kalabuxu waxay ku haboon Processor oo kale ee ugu tayada sareeya Baahida bariis Marie, bixiya sax kala Bixinta kordhiyo in la kordhiyo wax-soosaarkooda iyo faa'iidada.
Qaydhiin Rice kalabuxu waxay:
Waa wax ku ool ah ka saaraysaa karaa cilladaha caadiga Hut iyo adag oo wax Dibadda, discolouredgrains, badar jeeso, oo xariijimo bran, ulo, dhagaxyo iyo Seeds Dibadda rabin, dhameysatay Sort direen, nadiif ah, iyo ammaan.
White Rice kalabuxu waxay:
Sort baxay, waxaannu nidhaahnaa, miraha cas, huruud ah, iyo cagaar, tamaashiir Rice, Rice qaan gaadhin iyo discolored, iyadoo badar blackspotted kaalinta yar 0.25mm.
Parboiled Rice kalabuxu
Waxaan xallin karnaa madow iyo badar, discolored, kuwa kale madow spotted.And kasta oo badar haleysan gubay.
Nidaamka Standard hawlgalka Sorter ayaa lagu tilmaami karaa sida soo socota:
saarka warbixinta oo ku raran yihiin in Sorter ka via in-feed hopper.With oo gargaar ka gariirka ee wax qulqulka weheliyaan kanaal hoos u janjeera, taageere si Qaybinta ee channels.Then Inspection sheyga galaa aagga, Halkee waxaa la hubiyaa by ugu dareemayaal farsmada sare ama CCD -cameras.Cameras, markaan nuurka ka muuqataa ka ah waxyaabaha la soo xulay helay, dhalin signal korontada nidaamka Computer Operating.
Tacliiq: Waxaan leenahay noocyo badan 1 ilaa 16 Kumandooska kanaal hoos u janjeera, taageere u ah doorasho kasta si ay kulan Capacity saarka kala duwan.